साहित्य – Sudarshan Khabar
बिहानै झ्यालका पर्दाहरुलाई छिचोल्दै घाम मेरो आखा सम्म पर्यो झसङ्ग ब्युझिएछु आमा किचनबाट कराउदै हुनुहुन्थ्यो , अझै कति सुत्छस उठ छिटो , आज भोलि किन यति धेरै अल्छी भाको छस ह | म आमाको कुरा लाइ वास्ता नगरी बाथरुम छिरे , केहि बेरमा फ्रेस भएर किचन पसे मेरो लागि चिया टेबुलमा रेडी थियो गिलासको मुखबाट […]
सुमनराज पौडेल अफिस बन्द छ , व्यवसाय ठप्प छन् कोरोनाको महामारी दिन प्रतिदिन बढ्दो छ ,त्यसैले पनि आफ्नो अनि आफ्नो परिवारको सुरक्षाको निम्ति घर भित्रै बस्नु पर्ने अवस्था आएको छ र घरमै बसिरहेका छौ ।यसरी बसिरहँदा समय फुर्सदिलो बनेको छ ,मनमा अनेकौं कुराहरू खेलिरहेका छन् , सबथोक बन्द छ ब्याज अनि एक मुठ्ठी सास भने […]
उपेन्द्र अधिकारी । झण्डै पन्ध्र वर्ष पुग्न लागेछ । त्यो तस्बिरले मेरो पर्सको एउटा कुनामा ठाउँ पाएको । यो पन्ध्र वर्षमा मैले कतिवटा पर्स फेरेँ त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन मसँग । तर बस् त्यो तस्बिरले भने यो पर्सको कुनामा ठाउँ लिइनै रहेको छ । सायद मेरो मनको कुनामा पनि ठाउँ पाएर होला । पटक पटक […]
दिपक भट्टराई आफ्नै अस्मिता माथी आक्रमण गर्छौ भने छोरी आमा हरु बलात्कार गर्छौ भने कथाले तिमिलाई नपुंसक बनाईदिएको छ । तिमी दाजुभाईलाई लुट्छौ र भुट्छौ भने । हेर ती जङी पिलर बारम्बार सारिरहदा नक्सा काटेर जन्मदिन मनाउछौ भने । के रहयो त तिमी माथी भरोसा आफ्नै चिहान खन्छौ भने बस तिमी जाउ तर सगै सबैलाई […]
प्रतिगमन” कामरेडहरु, जब क्रान्ती र क्रान्तिका सपनाहरु सिंह दरबार देखि शितल निवासका छत,छतमा सुताईयो कहिले मन्त्रीका नाममा सुताईयो कहिले मेरा नाममा सुताईयो कहिले तेरा नाममा सुताईयो आखिर,अन्तत भागबन्डा कै नाममा सुताईयो हो त्यति नै बेला देखि हो प्रतिगमन जुरमुरायको। उ त संसद र दरवारभित्रका भित्ता भित्तामा दाउ पर्खदै छुपेको थियो। हामिले नै उस्को हात समाएर […]
क्षितिज सापकाेटा प्रिय दसैँ सरी ल प्रिय दसैँ मैले यसपाली तिमीलाई शुभकामना दिन सकिन ल ! हामि रैतिहरु कसरी पिसिआर टेस्ट गर्ने ? रिर्पोटनुसार उपचार कसरी गर्ने भन्ने पीडाको कोशीमा डुविरहेका वेला संस्कृतिको जर्गेना …. ल ठिकै होला .. तर विजयको उत्सबको रुपमा मनाईने विजया दशमी कुन विजयको उत्सबको रुपमा मनाउँ हामी ? प्रिय साथी […]
आमा छिटो गर्नु बाहिर फोटो खिच्ने अंकल आउनु भयो म कटनको पहेलो जामा तोरीको तेल लाएर सर्लक्क कपाल कोरेर पनि खेल्न निस्किएको थिए। मलाई एकै छिन् भए पनि खेल्न नै हतार थियो । आमा एकछिन है त भन्दै हुनुहुन्थ्यो । बाबा पनि रेडी भैसक्नु भएको थियो ,आमालाइ भने सधै समय लाग्ने थियो किनकि महिला हरुलाई […]
ओए त मलाई माया गर्छस ? उसले मेरो आखामा हेर्दै भनि म टक्क अडिए मेरो अनुहार रंगे हात समातिएको चोर जस्तै भयो , कसरि थाहा पाई ? कस्ले भन्यो ? आफ्नै मन माथि शंका लाग्यो ,म मा आएको परिबर्तन देखेर उ हास्न थाली आफैलाइ देखेर कता कता रिस पनि उठ्यो म किन डराउदै छु मैले भन्न नसकेको कुरा उस्ले भन्दै छ | म के के सोच्न थाले , […]